တရုတ်နိုင်ငံ: တရုတ်နှင့်၎င်းတို့၏ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံမှသင်၏ကျောင်းသားများကိုနားလည်ခြင်း | USAHello | USAHello
စံတရုတ် Mandarin သို့မဟုတ် (အရာရှိ); တုံနှင့်အခြားတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများတိုင်းပြည်တစ်လျှောက်လုံးပြောပြီနေကြတယ်.
တရုတ်နိုင်ငံတွင်အမျိုးသား, အမျိုးသမီးအကြားစာတတ်မြောက်မှုနှုန်းယေဘုယျအားဖြင့်မြင့်မားသည်, တရုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာပညာရေး၏အရေးပါပုံကိုသရုပ်ဖော်. တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးပြီးကတည်းက (1966-1976), တရုတ်အတွက်ပညာရေးစနစ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုစီးပွားရေးခေတ်မီတိုးတက်၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ, သောပညာရေးစနစ်တိုးတက်စေရန်သိသာထင်ရှားသောကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမှဦးဆောင်. သငျသညျတရုတ်ကလေးငယ်များပညာရေး၏အရေးပါပုံကိုသတိပြုမိကြသည်ကိုသတိပြုမိစေခြင်းငှါ.
သို့သော်, ကြောင့်တိုင်းပြည်၏အရွယ်အစားနှင့်အမျိုးသားပြန်လည်လူနည်းစုများ၏အကွာအဝေးမှ, ပညာရေးဆဲတိုင်းပြည်တစ်လျှောက်လုံးကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်ပညာရေးကိုလက်လှမ်းမီကန့်သတ်မြို့ကြီးများသို့မဟုတ်အခြားအချက်တွေနီးကပ်အပေါ်မူတည်နိုင်ပါတယ်.
တရုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းတလွှား, အချိန်မှန်, လုံ့လဝိရိယနှင့်ရိုသေလေးစားမှုဘုံအလေ့အကျင့်တွေဟာ, အထူးသဖြင့်တရုတ်ကျောင်းသားများအတွက်. ဆရာစကားပြောသည့်အခါဒါဟာထိုင်ဆက်လက်လေးစားမှုစဉ်းစားသည်. လေးစားမှုအခြေခံမူတရုတ်ယဉ်ကျေးမှု၌အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းနှင့်စာသင်ခန်းထဲမှာထင်ဟပ်စေနိုင်သည်.
မိသားစု / ကျောင်းတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု
တရုတ်ကလူနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါ, အသက်ကြီးမှုစားပေးမှုကြာ. ဤသည်ကအခြားသူများကိုနှုတ်ဆက်ရှေ့တော်၌ထိုအကွီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏မှယဉ်ကျေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတယ်. ဒါဟာမစ္စတာနေဖြင့်တရုတ်လူကြီးများဖြေရှင်းဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်, ဒေါ်။, အလှမယ်ပေါင်းဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုအမည်, မဟုတ်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအမည်များအားဖြင့်. သူတို့လက်ထပ်ထိမ်းမြားရသောအခါအမျိုးသမီးများနေ့ယေဘုယျအားဖြင့်မိမိတို့၏သမီးကညာကိုနာမတျောကိုစောငျ့ရှောကျ. တရုတ်ကလူလည်း၎င်းတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခေါင်းစဉ်အားဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေကြ. ဥပမာ, မိမိအခေါင်းစဉ်သုံးပြီးလိပ်စာလီ Ziang: အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလီသို့မဟုတ်ဒါရိုက်တာလီ.
တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုတရားဝင်သည်နှင့်သင်စကားပြောပြပွဲ၏နည်းလမ်းတွေကဒီတှေ့လိမျ့မညျ. ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအဘို့အနှုတ်ခွန်းဆက်စကားလက်ဆွဲပါဝင်သည်, နှင့်စကားပြောဆိုမှုအတွက်မိသားစုသို့မဟုတ်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများနှင့်အတူပါဝငျမဟုတ်လျှင်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမထိထိမိမိရှိ. ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, တရုတ်မနှစ်သက်သူစိမ်းများကထိမိခံရ. သို့သော်, တရုတ်ကလူကိုယ်ထိလက်ရောက်ကိုယ်ချင်းစာဖော်ပြတဲ့ပုံစံသကဲ့သို့သင်တို့ကိုထိလျှင်အံ့ဩခြင်းမပါဘူး.
အနီးကပ်မိသားစုဆက်ဆံရေးနှင့် collectivist ယဉ်ကျေးမှုမိသားစုများတရုတ်ကြောငျးသားမြား၏ဘဝအသက်တာ၌နီးကပ်စွာပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်ဟုဆိုလိုသည်. ထို့အပွငျ, တဦးတည်းရဲ့အကွီးအကဲမြားကိုလေးစားအပေါ်အလေးပေးတရုတ်ကျောင်းသားများက '' မိဘများဟာသူတို့ရဲ့သားသမီးရဲ့ဘဝအသက်တာ၌သြဇာညောင်းနေကြသည်ဟုဆိုလိုသည်. ဤသည်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုလည်းအကွီးအကဲမောင်နှမများနှင့်အငယ်မောင်နှမနှင့်အတူဖြစ်ပျက်. ထိုကွောငျ့, ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ, ပိုကောင်းတဲ့အခြေအနေကနားလည်သို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှာမိသားစုဝင်များမှမပြောတတ်ပညာရှိက, ဖြေရှင်းချက်သို့မဟုတ်စိတ်ကူးများ. သငျသညျအကွီးအကဲမောင်နှမမှပထမဦးဆုံးစကားပြောနိုင်သည်, တရုတ်မိသားစုအတွင်းမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, ရိုးရာမိသားစုဖွဲ့စည်းပုံတင်းကျပ်နှင့် hierarchical ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်သဘာဝအဆင့်ဆင့်ကနေတဆင့်မိသားစုသို့ထားတဲ့ကိစ္စကိုဖြေလျော့ပြဿနာများကိုရှောင်ရှားစေခြင်းငှါ.
တရုတ်စကားပြောဆိုမှုသွယ်ဝိုက်နိုင်ပါတယ်, သငျတို့သစကားလုံးများကိုနောက်ကွယ်ကအဓိပ္ပာယ်ကိုအနက်ကိုဘော်ပြပေးရန်လိုအပ်ပါမည်. စကားပြောဆိုမှုအတွက်, တစ်စုံတစ်ဦးကသူတို့အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုမှဆန့်ကျင်ဘက်လို့ပြောစေခြင်းငှါ (ဖြစ်ကောင်းပြစ်မှုပေးခြင်းသို့မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ privacy ကို၏ရှောင်ရှားရန်), ဒါကြောင့်ဒီအာရုံစိုက်နှင့်အစစ်အမှန်အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ရန်မေးခွန်းများကိုမေးရန်အရေးကြီးပါသည်.
တိုက်ရိုက်မျက်လုံးချင်းလေးစားမှုကိုပြသ, နိုင်ငံရေးနှင့်သတိ, ဒါကြောင့်မျက်လုံးချင်းနှင့်အတူစပီကာကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့အရေးကြီးတယ်. သားသမီးများ၏အကွီးအကဲမြားသို့မဟုတ်မိဘများစကားပြောသည့်အခါ, တဦးတည်းရဲ့အခေါင်းကိုလျှော့ချလေးစားမှုအခြားသောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်.
တရုတ်ကျောင်းသားများကိုသို့မဟုတ်မိသားစုနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာရှောင်ရှားရန်တစ်ဦးကလက်ဟန်ခြေဟန်ကိုလက်ညှိုး-point ရန်ဖြစ်ပါသည်. သင့်ရဲ့တပြင်လုံးကိုလက်သို့မဟုတ်ပြားထန်းအစားသင့်ရဲ့အညွှန်းကိန်းကိုလက်ညှိုးနှင့်ညွှန်ပြခြင်းထက်ကိုသုံးပါ. သင့်ရဲ့လက်ချောင်းကိုရယူရန်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရဖို့မြည်ကိုလည်းရှောင်ရှား. မဆိုမလေးစားသဘောထားအမြင်ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ဆက်သွယ်ရေး၏လေးစားမှု Modes သာသုံးပါ.
တရုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်နိုင်ငံရေးအ-related ပြောဆိုမှုများကိုရှောင်ကြဉ်, ထိုကဲ့သို့သောတရုတ်နိုင်ငံရေးဒါမှမဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးဝေဖန်မှုများအဖြစ်. ယဉ်ကျေးအောင်အကောင်းဆုံးက, အပြုသဘောသေးငယ်တဲ့ဟောပြောပွဲ.
တရုတ်လူဦးရေရဲ့အများစုဗုဒ္ဓဘာသာပေါင်းစပ်လေ့ကျင့်, ကွန်းဖြူးရှပ်ဝါဒ, နှင့် Taoism. လူဦးရေအလေ့အကျင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏တစ်ဦးကသေးငယ်လူနည်းစု, ပရို, ကက်သလစ်ဘာသာ, Mormonism, အစ္စလာမ်နှင့်ဂျူးဘာသာ. မြင်သာထင်သာတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများဟန်တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ, နှင့်လူဦးရေရဲ့သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်း Zhuang အပါအဝင်အခြားတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများပါဝင်သည်, Uygur, hui, ရီ, တိဘက်, Miao, မနျခြူး, မှနျဂို, Buyi, ကိုရီးယား.
hierarchical, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမများ၏အခန်းကဏ္ဍတရုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအထီးကြီးစိုးဖြစ်နေဆဲအဖြစ်ပိုပြီးရိုးရာအမြင်များအတွက်အစပြု, ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေပိုမိုလူ့အဖွဲ့အစည်းပိုမိုတန်းတူဖြစ်လာကြောင့်, အမျိုးသမီးများ၏အမြင်များပြောင်းလဲနေကြသည်. သို့သော်, အဆိုပါလုပ်သားအင်အားအတွင်းအမျိုးသမီးများ၏အချိုးအစားကြီးထွားလာနေသည်ပေမယ့်, အမျိုးသမီးတစ်ဦးနေဆဲပြည်တွင်းတာဝန်ဝတ္တရားရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်.
တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု Cross လမ်းညွှန်
ဒုက္ခသည်နှင့်လူဝင်မှုကျောင်းသားများကိုကူညီပံ့ပိုးဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုခငျြ? ပညာတတ်များဘို့ငါတို့ Professional ကဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကို sign up ပြုလုပ်ပါ.
သင်ဤဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး print ထုတ်နိုင်ပါတယ် PDF အဖြစ်တရုတ်ကျောင်းသားနောက်ခံကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို နှင့်သင့်စာသင်ခန်းထဲမှာတစ်ဦးအရင်းအမြစ်အဖြစ်စောင့်ရှောက်.